"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဟိုးလေတစ်ကျော်ကျော် ဖြစ်ခဲ့သော နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) ကျောင်းသားများ၏ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန် ရှင်းလင်းခြင်း
>>> အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်တို့သည် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ကျောင်းသား/သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြောကြားသမျှ ယခု အကြောင်းအကြားများသည် အမှန်တရားများသာဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့သည် အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးသလို အမှန်တရားကိုချပြစေလိုသည့် အတွက် ယခုလို သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပြောဆိုရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
>>> ပထမဦးစွာ ကျနော်တို့ ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှု ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာများအကြောင်းကို ပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်သည် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းသားစွမ်းရည် မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျောင်းသားနှင့်ဆရာ အထူးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုပါ။ ယခုနှစ် ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့် စာပေဟောပြောပွဲ၊ အနုပညာပဒေသာကပွဲ၊ အားကစားပွဲများတွင်လဲ ဘောလုံးပွဲသာမက ကြက်တောင်ရိုက်ပွဲ၊ စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲ၊ ခြင်းလုံးပွဲများကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် တရားပွဲ၊ ဇူလိုင်လ ၈ရက်နေ့ ကျနော်တို့ ကျောင်းမှာ ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒတရားပွဲများ ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းစည်းကမ်းပိုင်းနှင့် ပတ်သတ်၍လဲ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း စည်းနှင့်ကမ်းနှင့် ပြုမူသော တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ကျောင်းသားနှင့် ဆရာပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေသည့်ကြားထဲက ကျနော်တို့ ကျောင်းသားစုံတွဲတစ်တွဲ၏ မသင့်တော်သော အပြုအမူ ဗီဒီယိုဖိုင် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပွဲသည် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန် ရှင်းလင်းပွဲဖြစ်သည့်အတွက် ကျနော်တို့ အမှန်အတိုင်းသာ ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါမယ်။
ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည်၁နာရီအချိန်တွင် ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်မှ ၇၅% မပြည့်မီသော ကျောင်းသား/သူများ၏ မိဘများကို ပါမောက္ခချုပ်၊ မော်ကွန်းထိန်း၊ ဌာနမှူးများ၊ ဌာနအလိုက် မိသားစုဆရာမများခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲ၌ ကျောင်းသားများကျောင်းတက်မှန်ကန်ရေး၊ ကျောင်းစည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ ကျောင်း၏ Academic Plan၊ စာမေးပွဲစစ်မည့်ပုံစံ စသည်တို့ကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းနေ့ ၎င်းအချိန်မှာပင် သုံးထပ်ဆောင် Basement ဒေါင့်ခန်း၊ ချောင်အကျဆုံးဖြစ်သော စာသင်ခန်း 3B/6၌ အဆိုပါစုံတွဲသည် ထိုအရေးကို အခွင့်အရေးတစ်ခုသဖွယ် အသုံးချ၍ မဖွယ်မရာပြုမူဆောင်ရွက်နေသည်ကို ကျောင်းသားတစ်စုမှ တွေ့ရာမှ ဖုန်းဖြင့် Video ရိုက်၍ လူငယ်သဘာဝ နောက်ပြောင်လိုသော သဘောဖြင့် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို မစဉ်းစားဘဲ အချင်းချင်းဖြန့်ဝေရာမှ အခြားကျောင်းမှ ကျောင်းသားများထံရောက်သွားခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါ သတင်းမှာ ပျံ့နှံ့သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ကျောင်းမှ သိလျင်သိခြင်း သက်ဆိုင်ရာမိဘများအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအသိပေးပုံမှာလဲ မီဒီယာတစ်ခုမှ ဖော်ပြသလို အသိပေးခြင်းမှာလဲ လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာမိဘများက ၎င်းတို့၏ သဘောဆန္ဒအရ သားသမီးများအား နှုတ်ထွက်စာတင်၍ ကျောင်းမှနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်နောင်တွင် အလားတူကိစ္စများ မဖြစ်စေရန် မော်ကွန်းထိန်း၊ စီမံဌာနမှူး၊ အတန်းစစ်များ၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားများက စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကို ယခင်ကထက်ပို၍ အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းဆင်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အဆောင်လိုက် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများက စာသင်ခန်းများအား လိုက်စစ်၍ သော့ခတ်ရန် အလေးအနက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် မိမိတို့ ကျောင်းသားများထဲမှ တစ်ချို့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်၍ ပွင့်လင်းစွာဖြေရှင်းရန် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း သက်ဆိုင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်များ နစ်နာစေမည်ဆိုးသောကြောင့် ဖြေရှင်းခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်များသည် ဆင်ခြင်ထုံတရားမရှိသည့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိသည့် လူများ၏ အွန်လိုင်းပေါ် ဖြန့်ဝေမှုများကြောင့် အွန်လိုင်း စာမျက်နှာများတွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး ကျနော်တို့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအပေါ် မိဘပြည်သူများက စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒါဟာဖြစ်လဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် ကျနော်တို့ဘက်ကလဲ လက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် မီဒီယာများက အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆောင်းပါးများ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကလဲ အပြုသဘောဆောင်သည်များကို ကြိုဆိုပါသည် လက်ခံပါသည် ဒီလိုကိစ္စမျိုး မြန်မာနိုင်ငံရှိ မည့်သည့်ကျောင်းများတွင်မဆို ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရန် အားလုံးပူးပေါင်း၍ ပညာပေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အွန်လိုင်းများတွင် အဆိုပါကိစ္စကို ချဲ့ကား၍ ကောလဟာလများ ပုံကြီးချဲ့သတင်းများ မမှန်မကန်သတင်းများ ဖော်ပြ အပုတ်ချလာခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါချဲ့ကားမှုများကြောင့် ကျနော်တို့ ကျောင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာများစွာ ကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ မောင်နှမသားချင်း၊ သားသမီးချင်း၊ မညှာမတာပြောဆိုမှုများကြောင့် လက်ရှိကျောင်းတက် ပညာသင်ကြားဆဲ ကျောင်းသူများအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်မှ မတရား စနောက် ရန်စမှုများ အဆမတန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရေနစ်သူကို ဆင်းမဆယ် မကယ်ပဲ ၀ါးကူထိုးနေကြတာဟာ ဖြစ်သင့်ပါသလား။ ကျနော်တို့တွေဟာ မျိုးစစ်စိတ် အပြည့်ရှိသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့၏ မိသားစု၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ကျနော်တို့မှာ တာဝန်အပြည့်ရှိပါတယ်။ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုတ်ရမည့်အဖြစ် ကျနော်တို့ရဲ့ညီမတွေအပေါ် မကြုံစေလိုပါဘူး။
ကျနော်တို့ဟာ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများဖြစ်ကြပါတယ်။ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကို စက်မှုနိုင်ငံအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ဖို့ ကျနော်တို့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများက အရေးပါဆုံးအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုလူငယ်တွေကို မိဘပြည်သူများ မီဒီယာများက ဖေးမ မကူညီပဲ လျစ်လျူရှု ၀ါးကူထိုးနေလျင် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်သည် မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။
ကျနော်တို့သည် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသောသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ အကိုတို့၊ အမတို့ မီဒီယာများသည်လဲ အမှန်တရားကို သိချင်သောကြောင့် ယခု နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ကျောင်းသားများ၏ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန် ရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်သည်ဟု ကျနော်တို့ဘက်မှ ယုံကြည်ပါသည်။
>>> အခုပြောမယ့်စကားတွေက တစ်ဦးတစ်ယောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု ကိုတိုက်ခိုက်ပြီး ပြောလိုခြင်းမဟုတ် ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့အမှန်တရားကိုပေါ်ပေါက်ဖို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ယူပြောမယ့်အပိုင်းက မြန်မာသံတော်ဆင့် အတွဲ (၂) ၊ အမှတ် (၁၉) မှာပါတဲ့ ကိုဦးဆွေရဲ့ အရေးပေါ်အိတ်ဖွင့်ပေးစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်။
စရှင်းချင်တဲ့အချက်က ခိုးရိုက်တဲ့အဖွဲ့မှာဆရာတစ်ဦးပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် အရိုးသားဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အကြိမ်ကြိမ်နားထောင်ပြီးကြောင်း ၊ ဒီအချက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းသိရှိထားချက်များအရ ခိုးရိုက်တဲ့အထဲမှာ ဆရာတစ်ယောက်မှ မပါပါဘူးလို့ အတည်ပြုပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က “ကောင်မလေးအဖေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေသွားပြီတဲ့”ဆိုတဲ့အချက် ၊ ဒီမှာရှိတဲ့ မီဒီယာသမားများက ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုသိမှာပါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ ရိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူး ရဲအရေးပိုင်တဲ့ကိစ္စပါ ၊ မှုခင်းကိစ္စပါ၊ ဒီကိစ္စကိုအတည်ပြုချင်တယ်ဆိုရင် အစ်ကိုတို့ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက်အတည်ပြုနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်ချက် “အရပ်ထဲထိပြန့်နေတာတွေ၊ မှန်လားမှားလားမသိပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေတော့ရှိနေတာပဲ “ ဆိုတဲ့အချက် ၊ သူ့ရဲ့မူရင်းစေတနာကိုတော့ လေးစားလို့ရကောင်းရနိုင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့စကားလုံး အနေအထားတွေကို လက်ခံလို့မရနိုင်ပါ သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ အရပ်ထဲမှာပြန့်နေတဲ့ ပါးစပ်သတင်း ဆိုတာက ရပ်ကွက်ထဲမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီးလေးငါးယောက်ပြောရင် လေးငါးယောက်ပဲသိပါမယ်၊ ဒီဂျာနယ်က စောင်ရေတစ်သောင်းထုတ်တယ်ဆိုပါစို့ ၊ ဒါကိုလူလေးသောင်းက ဖတ်တယ်ဆိုပါစို့ ၊ ဒီလူလေးသောင်းရဲ့ ပါးစပ်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း နိုင်မှာလဲ ၊ သူကပါးစပ်သတင်းလို့ပြောပေမဲ့ ပါးစပ်သတင်းလို့မထင်ပဲနဲ့ အမှန်လို့ထင်သွားတဲ့သူတွေရှိမယ် ၊ ဒီကိစ္စစပြန့်တုန်းက ကျောင်းသားလူငယ်အသိုင်းဝိုင်း ၊ နောက်တော့အွန်လိုင်းမီဒီယာအသိုင်းအ၀ိုင်း ၊ အဲဒီအချိန်အထိ ကျွန်တော်တို့အမေတွေမသိသေးပါဘူး၊ Printed Media မှာကျောင်းနာမည်နဲ့ပါလာတဲ့အတွက် ကျောင်းနာမည်အများကြီးထိခိုက်ပါတယ် ၊ ပြီးတော့လူကြီးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ စပြီးပျံ့နှံ့သွားတယ် ၊ နယ်ထိပျံ့ နှံ့သွားတယ်။
နောက်တစ်ချက်က “သန်လျင်တည်းခိုခန်းတွေမှာ GTC ၀တ်စုံတွေနဲ့ အခန်းတိုင်းပြည့်ဆိုတဲ့ ပါးစပ်သတင်းကသန်လျင်တစ်မြို့လုံးအသိပဲ ဆရာတို့ရေ”တဲ့ “ဂျာနယ်တွေကဘယ်လောက်ရေးရေး တာဝန်ရှိသူလူကြီးမင်းများက ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး ဆရာတို့ရေ’ တဲ့ ၊ ဒီအချက်ကို သန်လျင်ကျောင်းမှာ လက်ရှိတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော ၊ ဒီမြို့နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ လုံးဝပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ် ၊ သန်လျင်တည်းခိုခန်းတွေမှာ ကျောင်းဝတ်စုံတွေနဲ့အားလုံးအပြည့်ဆိုတဲ့ သတင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို အစ်ကိုအစ်မတို့ကိုယ်တိုင် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် “အပြည့်” ဆိုတဲ့စကားပေါ့ ၊ သန်လျင်တည်းခိုခန်းတွေမှာ GTC ၀တ်စုံတွေနဲ့ အခန်းတိုင်းပြည့်ဆိုတဲ့စကားက တော်တော်လေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် “ အခုတော့အုပ်ချုပ်ရေးတင်မက ကျန်တဲ့မဏ္ဍိုင်နှစ်ခုရော ၊ စာနယ်ဇင်းတွေရော ၊ မိဘပြည်သူတွေရော၊ ဆရာ့ဝတ်ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရော ၀ိုင်းဝန်းကြရမယ့် အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီ “ တဲ့ ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားက လက်ရှိမှာ အားလုံးကနိုင်ငံတော်အသစ်ဆီကို အတူတူပူးပေါင်းတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ပါ ၊ ဒီလိုအချိန်မှာအားလုံးက ၀ိုင်းကူညီရမယ့်အချိ်န်ပါ ၊ ကိုကျော်ဇင်ထက်ပြောသလို ရေနစ်သူကိုဝါးကူထိုး သလိုတော့မဖြစ်စေချင်ပါ ၊ အပြုသဘောနဲ့ဝိုင်းပြောတာကို လက်ခံကြိုဆိုပါတယ် ၊ ပြီးတော့ ကျောင်းမှာရှိတဲ့ ပါချုပ်နဲ့ ဆရာတွေက တာဝန်တွေကိုလစ်ဟင်းနေတာမဟုတ်ပါ ၊ ကျောင်းမှာ ကျောင်းသား ၉၀၀၀ကျော် ရှိပါတယ် ၊ ဒီထဲမှာ ရာနှုန်းပြည့်ကောင်းမယ် မပြောလိုပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာ အားလုံးနဲ့ယှဉ်ရင် မှတ်ကျောက်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အဖြေစကားပါ။
ကျွန်တော်တို့နားလည်တာက အိတ်ဖွင့်ပေးစာဆိုတာ ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့မယ် ၊ သက်ဆိုင်ရာမီဒီယာက စာမျက်နှာပေါ်တင်ပေးတာပေါ့ ၊ ကိုဦးဆွေကိုယ်တိုင်က ပါးစပ်သတင်းလို့ပြောတယ် ၊ အရပ်ထဲမှာ ပြန့်နေတာတွေလို့ပြောပါတယ် ၊ ဒီလိုအချက်တွေပါနေရဲ့သားနဲ့ စာမျက်နှာပေါ်တင်ပေးတဲ့ မြန်မာသံတော်ဆင့် ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ် ၊ ဒါကတော့ ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသား တွေရဲ့ဖြေရှင်းချက်ပါ ။
ဒီတစ်ပတ်ထွက် မြန်မာသံတော်ဆင့်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာက ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကို လုံးဝဂုဏ်သိက္ခာကျသွားတဲ့အနေအထားကို ရောက်သွားပါတယ် ၊ ဒါ့ကြောင့် ဒီပွဲကိုစီစဉ်ရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။
ဦးစွာပြောလိုတာက ဂျာနယ်မှာ ဒီသတင်းကိုမျက်နှာဖုံးမှာတင်တယ် ၊ ဒီကိစ္စဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါသလား ??? သမ္မတနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေက နိုင်ငံအတွက်ပိုအရေးမပါဘူးလား ??? ကျောင်းကအတွဲတစ်တွဲရဲ့မဖွယ်မရာလုပ်ရပ်ကြောင့်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာပါလဲ ၊ ဒါက စဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်ပါတယ် ၊ အဓိက က Highlight လုပ်ထားပြီး Reporter နာမည်လည်းမပါပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ချက်ကတော့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က တည်းဖြတ်ရေးသားချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကို ရှင်းပြပါမယ် ၊ ဒီထဲမှာ အမှန်တစ်ခုပဲပါတယ် ၊ ကျန်တာ အကုန်တလွဲတွေပါ ၊ ဒါကိုပြောချင်လို့လည်း ဒီပွဲကိုလုပ်တာပါ ၊ ဒီကိစ္စကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ် လက်ခံပါတယ် ၊ အပြုသဘောဆောင် ထောက်ပြတာကိုလည်း လက်ခံပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီထဲမှာထပ်ပါလာတာက “ပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသတယ်” တဲ့ ၊ ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အားလုံးသိပါတယ် ၊ ပါမောက္ခချုပ်ဟာ ပညာရှိပါ ပညာတတ်ပါ နိုင်ငံခြားမှာ Ph.D ရထားတဲ့သူပါ ၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ ၊ အားလုံးနားလည်ပါတယ် ၊ ဘယ်သူက ဒီလိုမဖွယ်မရာတစ်ခုကို ကျောင်းသားတွေ မိဘတွေကိုခေါ်ပြီး ဘယ်လိုပြမှာလဲ? စဉ်းစားတတ်ရင် စဉ်းစားနိုင်ပါတယ် ၊ ဒါမမှန်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့က ခုကျောင်းမှာ BE ရောက်နေပါပြီ ညီငယ်တွေကိုလည်းဦးဆောင်ရသလို အထက်ပိုင်းနဲ့ ၊ ဆရာ/မ နဲ့လည်း Good Relationship ရှိပါတယ် ၊ အသေးစိတ်မဟုတ်တောင် ကျောင်းကိစ္စတွေကို အကုန်သိပါတယ် ၊ ဒီလိုကိစ္စမျိုးကျောင်းမှာလုံးဝမကြားမိပါဘူး၊ သူတို့ဘယ်က သတင်းရပြီးရေးလဲတော့ မသိပါ။
နောက်တစ်ချက် ပါမောက္ခချုပ်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က နုတ်ထွက်ခိုင်းတယ် ပြောပါတယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဘယ်လိုပတ်သက်သလဲ နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် ၊ နည်းပညာကျောင်းအားလုံးဟာ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ စက်မှုနဲ့သက်မွေးပညာဦးစီးဌာနအောက်မှာရှိပါတယ် ၊ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ဒါကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ နှုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ရဲရဲပြောရဲပါတယ် ၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြောချင်ပါတယ်၊ ဒီကိစ္စကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှာ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ အတည်ပြုပြီးပါပြီ ၊ အားလုံးအနေနဲ့လည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူထံ သွားရောက် အတည်ပြုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဒီကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းကိုအာမခံပါတယ် ။
မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့သတင်းတစ်ခုကိုတင်ရင် သေသေချာချာ သိသင့်ပါတယ် ၊ “သပန” ဟာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မဆိုင်ပါ ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဒါဟာရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အရေးအသား တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။
ထပ်ပြောချင်တာ တစ်နေ့က မြန်မာသံတော်ဆင့်ဂျာနယ်က တာဝန်ရှိသူနဲ့ ပါမောက္ခချုပ် တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှာ ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုမှတ်မိပါတယ် “ကျွန်မတို့သတင်းတိုက်က သေသေချာချာ Confirm ဖြစ်မှတင်တာပါ ကျွန်မတို့သတင်းကို ကျွန်မတို့တာဝန်ယူပါတယ် “ လို့ပြောခဲ့တာကို အားလုံးသိအောင်ပြောပြတာပါ ၊ ဒီကျောင်းသတင်းကိုဖော်ပြတယ်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းကို သေသေချာချာသိထားသင့်တာပါ။
နောက်တစ်ချက်က ဂယက်ရိုက်သွားတဲ့ကိစ္စပါ ၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာခေတ်မှာ သတင်းပျံ့သွားတဲ့အချိ်န်မှာ အားလုံးကခံပြင်းပါတယ် ၊ ဒီမဖွယ်မရာကိစ္စစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ တစ်ခြားမီဒီယာတွေကလည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖော်ပြချက်မျိုးဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီဂျာနယ်မှာတော့ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှန်းတော့မသိပါဘူး အနုတ်သဘောဆောင်တဲ့ အရေးအသားမျိုးကိုပဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ၊ နားလည်ထားတာက သတင်းသမားတွေဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်နဲ့အတူ ကျင့်ဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်နာသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ၊ ဒီလိုသတင်းမျိုးကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထူးထူးခြားခြား Highlight လုပ်ပြီး မျက်နှာဖုံးမှာရော အထဲမှာပါ ဖော်ပြလဲမသိပါ ၊ ဒီသတင်းတင်လိုက်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ဘာအကျိုးရှိသွားပါလဲ ??? လိုအပ်ချက်တွေကိုအပြုသဘောဆောင်တင်ပြတာကိုလက်ခံပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလိုရှင်းလင်းပွဲကိုလုပ်ဖြစ်တာပါ ။
>>> ကျမက လက်ရှိနည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)မှာ တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသူပါ။ ကျမပြောချင်တာက ဂျာနယ်မှာဖော်ပြတဲ့ သတင်းမှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ၊ ဒီစာမျက်နှာပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီကျောင်းသားအသိုင်းအဝိုင်းကမဟုတ်တဲ့ မိဘပြည်သူတွေ အထင်အမြင်မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဂျာနယ်ရဲ့ဖော်ပြပုံကိုကြည့်ပါ၊ ကျမကArchကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက် အရောင်တွေရဲ့သဘောတရားကို နားလည်ပါတယ်။ ကျမသိတာက ဂျာနယ်တွေမှာ Highlight ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ ကာလာကို အဝါရောင်သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလို နက်ပြာရောင်မျိုးကို ယူလေ့ယူထမရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ နှစ်ဦး၏ ညစ်ညမ်းဗီဒီယို GTC ကျောင်းတွင်ပြသတဲ့။ အဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းလေး ဒီတစ်ပေတောင်မရှိတဲ့လက်မပတ်လည်လေးက ကျမတို့ ကျောင်းသူတွေရဲ့ သိက္ခာဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်တယ်ဆိုတာ ကျောင်းသူဖြစ်တဲ့ကျမ အသိဆုံးပါ။
အားလုံးမှာ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေလဲ ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့် အစ်မ ညီမတစ်ယောက် အစခံရရင် ဈေးဘယ်လောက်လဲ ဘယ်လောက်တန်လဲ အမေးခံရရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ ကျမမေးခွန်းပြန်ထုတ်ချင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာကို ကျမလက်ခံပါတယ်။ မငြင်းပါဘူး။ ဒီကျောင်းသားတွေ ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ထဲမှာ မဖြစ်စေလောက်ရာခိုင်နှုန်းထဲက ဖြစ်ပွားသွားတဲ့အတွက် ကျမ မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီသတင်းထောက်ကနေပြီးတော့ စာမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်တဲ့ ကလောင်သွား ဘယ်လောက်ထိ တစ်ဘက်သားအပေါ်ထိခိုက်သွားမလဲဆိုတာ ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ အသိဆုံးပါ။ သူကဘယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘယ်သူ့ကို မွှန်းချင်လဲဆိုတာ ကျမ မသိပါဘူး။ သိရအောင်လဲ ကျမလူကြီးပိုင်းထဲမရောက်သေးပါဘူး၊ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီကလောင်သွားရဲ့ ဓားသွားက ကျမတို့ ကျောင်းသူတွေရဲ့ နှလုံးသားကို နာကြင်စေသွားပြီး ကျမတို့ သိက္ခာတွေပါ…………
ကျမတို့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသူတွေဟာ အိမ်ထဲမှာပဲနေလို့မရပါဘူး။ သွားရပါတယ် လာရပါတယ်။ ယူနီဖောင်းနဲ့လဲ သွားရပါတယ်။ ဒီယူနီဖောင်းကို မြင်တာနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ အားလုံး မီဒီယာတွေ အသိပါ။ ကျမပြောချင် ထောက်ပြချင်တာက ဒီမီဒီယာတွေဟာ နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့ စတုတ္ထမာန်တိုင်ပါ။ ဒီကသတင်းသမားတွေအနေနဲ့ ငါတို့ ဒီလောက်ထိ အရေးပါတဲ့နေရာမှာ ရှိနေပါလားဆိုတာ ရင်ထဲမှာ အပြည့်အဝနဲ့ ခံယူထားမယ်လို့ ကျမယုံကြည်ထားပါတယ်။
ကျမဒီကျောင်းကိုတက်ခဲ့တာကလဲ ကျမရွေးစရာမရှိလို့ တက်စရာမရှိလို့ တက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမအမှတ်နဲ့ ကျမတက်ချင်တဲ့ ကျောင်း၊ ကျမယူချင်တဲ့မေဂျာ အကုန်ယူဖို့ အခွင့်အရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျမယူချင်တဲ့ ဘာသာရပ်က ဒီကျောင်းမှာ ရှိမယ်လို့ ကျမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ တက်ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမျိုးကျမတက်နေတဲ့ကျောင်းကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ထောက်ပြမှုတွေကို ကျမတို့လက်ခံပါတယ်။ အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ ဒီကလောင်သွားကြောင့် ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ ရိုက်ချိုးခံရပါတယ်။ အဲတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ နောက်တက်လာမယ့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဒီကျောင်းမှာပဲ ငါတို့လိုချင်တဲ့ ပညာတဲ့ ဒီမှာပဲရနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့သူတွေကို သူတို့မိဘတွေက စိတ်ပူပြီးမလွှတ်တော့ရင် ဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုး မိဘတွေစိတ်ထဲ ရောက်သွားအောင် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ဒီကလောင်သွားကြောင့် ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဒီလိုကဏ္ဍတွေထိခိုက်သွားမလဲ စဉ်းစားမိရဲ့လား။ စဉ်းစားမိတဲ့လူ ရှိမယ်လို့လဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားမိတဲ့လူတွေဟာ ကျမတို့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပြီးတော့ ထောက်ပြပေးပေးပါ။
နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ သတင်းသမားတွေဟာ သိတိုင်း၊ မှန်တိုင်း၊ အကျိုးရှိမှ ရေးသင့်မှရေးသည်တဲ့ ဒါသံတော်ဆင့်ဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါ။ အဲတော့ ဒီသတင်းတွေဟာ မှန်တယ်ပဲထားဦး ဖတ်တဲ့လူတွေအတွက် ဘာအကျိုးမှမရှိရင်မရေးရပါဘူး။ သတင်းသမားတွေမှာလဲ သတင်းသမား ကျင့်ဝတ်တွေရှိမှာပါ။ ဒီစတုတ္ထမာန်တိုင် သတင်းသမားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာတကယ်ရှိပါသလား ပြန်ပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ချင်အောင်ကိုလဲ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဒီလက်မဝက်ဝန်းကျင် Highlight လေးက ကျမတို့ရင်ကို လာထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် GTC လို့ပြောတဲ့အတွက် ကျမတို့ နည်းပညာကျောင်းက တစ်ကျောင်းထဲမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Hot ဖြစ်နေတဲ့ သတင်းထည့်တာကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် အကုန်လုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြတယ် ကျောင်းသားတွေထံမှာလဲ လူငယ်စိတ်ဓာတ်၊ လူငယ်ဆိုတာသွေးပူတယ်၊ အဲ့တော့ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်ရင်ထဲမှာ ခံစားရတာပေါ့။ ဒီကလောင်ရဲ့ နောက်ကွယ်က ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာတော့ ကျမမသိဘူးပေါ့။ ဒီရည်ရွယ်ချက် ဘယ်ကိုဦးတည်သွားလဲ မသိပါဘူး။
ကျမတို့ စာမေးပွဲလဲ နီးပါပြီ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျမတို့ B.Tech 2nd yr တွေပိုပြီးတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီစာမေးပွဲနီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီကျောင်းသားတွေ မခံချင်ဖြစ်အောင် စိတ်ဆွပြီးတော့ ဘာကိုဦးတည်ချင်တာလဲ။ ကျမတို့ဟာ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေ စဉ်းစားတတ်တယ် အတွေးအခေါ်ရှိတယ်။ အသုံးချခံမဖြစ်လိုဘူး။ ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေ ဖြစ်နေလဲဆိုတာ မသိတော့ ဒီလှည့်ကွက်တွေထဲမှာ အသုံးချခံလိုက်ရမှာ စတေးလိုက်ရမှာတော့ ကျမတို့ မခံမရပ်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေါ့ လုပ်နေတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ ကျမတို့ အခုလို ကျောင်းသားများ အမှန်တရားဖြေရှင်းခြင်းပွဲလေးကို မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီကျောင်းသားထုထဲမှာ မကျေနပ်ချက်တွေကတော့ ရှိနေတာပေါ့။ ဒီလိုမျိုးလုံးဝ သတင်းအမှားကြီးက ကျမတို့ကိုထိခိုက်သွားစေတယ်ပေ့ါ။ ပြီးတော့ ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာကလဲ သတင်းအမှန်နဲ့မဟုတ်ဘူး သတင်းအမှားနဲ့ပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး မခံမရပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကြောင့် သိမ်းထားတဲ့ခံစားချက်တွေကို တစ်ယောက်ယောက်ကများ သွားပြီးတော့ သွေးထိုးပေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ ဒါကျမတို့ စဉ်းစားရမယ်။ ကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ကြားရေးကို မထိခိုက်စေလိုတဲ့ဆန္ဒ ကျမတို့မှာ အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျမတို့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဒီပွဲကို လုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျမပြောချင်တာ ဒီအချက်အလက်တွေရဲ့နောက်ကွယ်ကနေ ခံစားသွားရတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ ပြည်သူတွေက ဒီ Printed လုပ်ထားတဲ့ သတင်းတွေကို အမှန်လို့ထင်သွားပြီ ဒါကဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့ အားလုံးကယုံကြည်အားထားနေကြရတာပါ။ ဒီလိုယုံကြည်နေမှုကို ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကို ကျမတို့က ယုံကြည်ပါတယ် အားလဲ အားကိုးပါတယ်။ ကျမပြောချင်တာ ဒါပါပဲ။
ကျမက နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုဂျာနယ်တွေက Highlight နဲ့ဖော်ပြပေးတာတွေဟာ ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားတာနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ သတင်းအမှန်လို့ထင်သွားမှာပါ။ ဒီကောလဟလတွေကြောင့် ကျမတို့ နည်းပညာကျောင်းသူတစ်ရပ်လုံးက အများကြီးကို ခံစားနေရတာပါ။ အပြင်သွားရင် လုံခြုံမှုလဲနည်းလာပါတယ်။ ယူနီဖောင်းနဲ့သွားရင် ပတ်ဝန်းကျင်က နောက်ပြောင်စော်ကားတာတွေ ခံနေရပါတယ်။ ဒီလိုကောလဟာလတွေက စော်ကားခံနေရတာက တစ်ဆင့် ဒီလိုသတင်းအတည်ပုံစံနဲ့ စော်ကားခဲ့တဲ့အတွက် ပိုပြီး စော်ကားခံနေရပါတယ်။ ကျမတို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)ဟာ ကျမရဲရဲကြီး အာမခံရဲပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးပါ။ အတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေ မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ကျောင်းဆိုတာ ကျမအာမခံရဲပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းကလုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကျမတို့ကျောင်းက ၃နှစ်ဆက်တိုက်ဗိုလ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲလို အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေရှိရဲ့နဲ့ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ကျမတို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတဲ့လူတွေ၊ ဒီနည်းပညာကျောင်းသူတွေကိုလဲ ဒီလိုအတန်းအစားလို့ ထင်မြင်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုထင်မြင်နေတာကို ချေဖျက်ချင်တဲ့အတွက် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက် ဒီပွဲလေးကိုလုပ်တာပါ။ ကျမတို့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဟာ အသက်တွေအများကြီး မကြီးကြသေးပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားစေလိုပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေတင်မကဘူး ကျောင်းသူတွေပါ ခံစားစေရပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသာ လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်ရင် ဆူပူမှုတွေဖြစ်ပွားသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးမဖြစ်ပွားစေနိုင်ရန် ကျမတို့ကလဲ ကျမတို့ကျောင်းသူတွေ ထိန်းပါတယ်။ မီဒီယာတွေလဲ သေသေချာချာသိအောင်လို့ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရတာပါ။ အခုချိန်ကစပြီး မီဒီယာသမားများမှ မေးမြန်းလိုသည်များမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျမတို့ဘက်ကလဲ ဖြေနိုင်သမျှ အမှန်အတိုင်း သေသေချာချာဖြေပေးသွားပါမယ်။
မီဒီယာအသီးသီးမှ တစ်ဦးခြင်းစီ သိလိုသည်များမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
Myanmar Daily Star မှကူးယူမျှဝေသည်
Posted by Than Minn Naing at 7:16 PM